नेपाल बन्दका क्रममा देशभर कहाँ-कहाँभयो बम विस्फोट ? यस्तो छ ताजा अपडेट — Imandarmedia.com
नेपाल बन्दका क्रममा देशभर कहाँ-कहाँभयो बम विस्फोट ? यस्तो छ ताजा अपडेट
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सोमबार आव्हान गरेको बन्दका क्रममा बम र शंकास्पद वस्तु राखिएको अनुमान प्रहरीको छ। बन्दका कारण पोखरामा सवारी साधन चलेका छैनन्।
उता पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरमा एक ट्रक र एक जिपमा पेट्रोल बम प्रहार भएको छ । पेट्रोल बम प्रहारबाट ट्रक चालक घाइतेसमेत भएका छन् ।